साउन १९, २०७८, १२:३६ PM
करिब दुई दशकअघि प्रचण्डहरु शेरबहादुर देउवाहरुको सरकारसँगै शासनसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेका थिए । पछि आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने शासक देउवाविरुद्ध आगो ओकल्न थाले । युद्धताका समानता, स्वतन्त्रता र समाजवादको नारा घन्काइरहेका थिए । भोक, प्यास गरिबी र अशिक्षाबाट पिल्सिएका निर्धा–निमुखा जनतालाई ठूला गफ दिइरहेका थिए । जनताको उनीहरुको गफलाई पत्याइरहेका थिए ।
दुर्गम र विकट भेगमा प्रचण्डहरुको प्रभावको पारो चढ्दो थियो । सशस्त्र संघर्षको मूल उद्देश्य नै देशमा सामन्तवाद, पुँजीवाद र वर्गीय विभेदको अन्त्य भनिएको थियो । शेरबहादुर देउवाहरुलाई वर्गसत्रु घोषणा गरिएको थियो । अर्थात् माओवादीको नजरमा देशको पछौटेपन, विभेद, दमन, शोषण र गरिबीको कारढा देउवाहरु थिए ।
दलित पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गमाथि शोषण गर्ने शोषकको रुपमा देउवालाई चित्रित गरिन्थ्यो । माओबादी युद्ध देउवा प्रवृत्तिविरुद्ध भनिएको थियो । देउवाहरु प्रतिगामी मानिन्थे । तर अहिले परिवेश बेग्लै भएको छ । प्रचण्डको नजरमा एकदम अग्रगामी नेता भएका छन् । हिजो जोविरुद्ध माग राखेर आन्दोलन गरिएको थियो, जसले टाउकाको मूल्य तोकेको थियो, जसले राजालाई संसद बुझाएको थियो, त्यहीं मान्छे आज प्रचण्डलाई प्यारो लागेको छ । अग्रगामी लागेको छ । कुनै बेलाको दलाल, यथास्थितिवादी नेता आज एकदमै क्रान्तिकारी मानिएका छन् ।
हिजो के कारणले देउवाहरुलाई वर्गसत्रु देख्नुभयो ? आज कसरी परम मित्र बन्न पुगे रु देउवा र कांग्रेसलाई समर्थन गर्न–नगर्न तपाईं र तपाईं को दल स्वतन्त्र छ । तर इमानदारीता र नैतिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ तपाईले दिनै पर्छ । पटक–पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो त किन निर्दोष सेना र प्रहरीका सिपाहीलाई जिउँदै जलाउनु भयो ? शेरबहादुरकै शरणमा जानु रहेछ त जीवनको वास्तविकता बुझ्न नपाउँदै दिलबहादुर रम्तेलहरुलाई किन शहीद बनाउनु भयो ? हजारौंको काख किन रित्तो बनाउनु भयो ? मैना सुनारहरुको जिजिविषा किन बीचमै अलप पार्नु भयो ? माडीमा किन रगतको बाढी बगाउनु भयो ? आखिर देशका सच्चा पहरेदार शेरबहादुर नै थिए भने होलेरीमा किन रगतको होली खेल्न खोजेको ?
शेरबहादुरहरु नै समृद्ध नेपालका सारथि रहेछन त १७ हजारको बलि किन चढाउन भयो ? तपाईंमा थोरै पनि परिवर्तनकारी र अग्रगमनकारी सोच बँचेखुचेको हुन्थ्यो भने कम्तिमा कांग्रेसभित्रै अर्को पात्र खोज्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्थ्यो । बहस गर्नपर्ने थियो । माधव नेपाललाई त विकल्प देख्ने आँट गर्नु भएन । जबरजस्ती देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कारण के थियो ? (यो लेखकको निजी विचार हो ।) – नेपाल प्रेस
धनुषामा डकैती : ५० तोला चाँदी र सुनका गहनाहरु लुटेर लगियो
धनुषा : रबिदासको शव बुझ्न परिवार तयार, क्षतिपूर्ति र छानविनको आश्वासन मात्र